Kala soocida cimilada Köppen: astaamaha iyo noocyada cimilada | Saadaasha Shabakadda
Cimilada meeraha waxaa loo kala saari karaa siyaabo kala duwan iyadoo loo eegayo doorsoomayaasha qaarkood iyo xuduudaha. Waa lagama maarmaan in la kala saaro cimilada si loo sameeyo amar amar ku saabsan qaybinta noocyada kala duwan ee xoolaha iyo dhirta, naqshadaha dhismaha, dhisidda magaalooyinka, saadaasha hawada, iwm. Mid ka mid ah ayaa ah Kala soocida cimilada ee Köppen. Waa nidaam salka ku haya xaqiiqda ah in dhirta dabiiciga ahi ay xidhiidh cad la leedahay cimilada, sidaa darteed xuduudaha u dhexeeya cimilo iyo mid kale ayaa la dejiyey iyada oo la tixgelinayo sida loo qaybsanayo dhirta meelaha cayiman.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa kala-saarista cimilada ee Köppen ay salka ku hayso iyo astaamaha ugu waaweyn ay yihiin.
2 Kala soocida cimilada Köppen: noocyada cimilada
2.1 Kooxda A: cimilada kulaylaha
2.2 Kooxda B: cimilada qalalan
2.3 Kala soocida cimilada Köppen: kooxda C
Kala soocida cimilada Köppen waxay ku saleysan tahay sameynta cimilo ku saleysan aagga qeybinta noocyada qaar. Halbeegyada si aad u awoodid go'aaminta cimilada aag inta badan waa celceliska celceliska sanadlaha iyo billaha iyo roobka. Xilliga xilli-roobaadka roobka sidoo kale badanaa waa la tixgeliyaa. Xaaladdan oo kale, waa wax ka duwan.
Waxay u kala qaybisaa cimilada adduunka shan qaybood oo waaweyn: kulaylaha, oomanaha, kuleylka, qaaradaha, iyo cirifka, oo lagu garto xarfaha waaweyn Koox kasta waa koox hoosaad koox hoosaad kastaa waa nooc cimilo ah.
Kala soocida cimilada ee Köppen waxaa markii hore abuuray khabiirkii cilmiga cimilada ee Jarmalka Wladimir Köppen sanadkii 1884, oo markii dambe dib loo eegay isaga iyo Rudolf Geiger, wuxuu qeexayaa nooc kasta oo cimilo ah oo leh waraaqo taxane ah, badanaa saddex, oo tilmaamaya habdhaqanka heerkulka iyo roobka. Waa mid ka mid ah kala soocida cimilada ee sida aadka ah loo isticmaalo sababa la xiriira guud ahaan iyo fudeydkiisa.
Kala soocida cimilada Köppen: noocyada cimilada
Aynu aragno waxa ay yihiin faahfaahinta nidaamka si loo go'aamiyo koox kasta oo cimilo ah, nooc iyo koox-kooxeed kasta. Buugga guud ee cimilada wuxuu u qaybsan yahay kuwo kale wuxuuna soo bandhigayaa dhirta la xidhiidha iyo gobollada laga helo.
Kooxda A: cimilada kulaylaha
Cimilada noocan ah, bilna sanadka ma leh celcelis heerkul ka hooseeya 18 digrii. Roob-sannadeedka ayaa ka sarreeya heerka uumi-baxa. Waxay ku saabsan tahay cimilada ka jirta kaymaha kulaylaha. Kooxda A ee cimilada dhexdeeda waxaan ku leenahay xoogaa qaybo ah. Kuwaani waa kuwan soo socda:
Equatorial: Cimiladan, bilna ma leh roob ka hooseeya 60mm. Waa jawi kulul oo nacayb badan sanadka oo dhan oo xilliyado aan jirin. Waxay ka dhacdaa Ecuador ilaa 10 digrii oo loolka ah waana cimilada hawadu kacsan tahay.
Monsoon: kaliya hal bil ayaa ka hooseysa 60mm oo haddii dib u soo cusbooneysiinta bisha ugu qalalan ay ka sarreyso qaaciddada [100- (Roobka sanadlaha ah / 25)]. Waa jawi diiran sannadka oo dhan oo leh xilli gaaban oo qalalan oo ay ku xigto qoyaan leh roob culus. Waxay badanaa ka dhacdaa Galbeedka Afrika iyo Koonfur-bari Aasiya. Waa cimilada hawdka Monsoon.
Gogosha sariirta: waxay leedahay bil ka hooseysa 60 mm iyo haddii roobka bisha ugu qalalan uu ka yar yahay qaaciddada [100- (Roobka Sannadlaha ah / 25)]. Waa jawi diiran sannadka oo dhan oo leh xilli qalalan. Waxay umuuqataa markaan ka guureyno Ecuador. Waa cimilada laga helo Cuba, aagag ballaaran oo Brazil ah, iyo Hindiya inteeda badan. Waa nooc ka mid ah savannah.
Kooxda B: cimilada qalalan
Roobabka sanadlaha ah ayaa ka yar suurta galnimada ka bixitaanka sanadlaha ah. Waxay yihiin cimilada dhulka cawska iyo lamadegaanka.
Si loo go'aamiyo haddii cimiladu qallalan tahay, waxaan helaynaa xadka roobka ee mm. Si loo xisaabiyo marinka, waxaan ku dhufaneynaa heerkulka celceliska sanadlaha ah 20, ka dibna ku dar haddii 70% ama in ka badan roobabku ay ku dhacaan xilli-dugsiyeedka ay qorraxdu tahay 280. Kuwa ugu sarreeya (Abriil ilaa Sebtembar ee woqooyiga hiiraan, Oktoobar ilaa Maarso koonfuurta koonfureed), ama 140 jeer (haddii roobka xilligaas uu u dhexeeyo 30% iyo 70% wadarta roobabka), ama 0 jeer (haddii muddada u dhaxeyso 30% iyo 70%) Roobku waa ka yar yahay 30% wadarta roobab.
Haddii wadarta celceliska roob celceliska sannadku ka sarreeyo marinkan, ma aha cimilada B. Aan aragno waxa ay yihiin cimilada qalalan:
Steppe diirran jiilaalka waa kuleyl dhexdhexaad iyo diirimaad xagaaga aad u diirran Roobku waa yar yahay dhirta dabiiciga ahna waa la sugayaa. Waxay badanaa ku dhacdaa kuleylaha iyo kuleylka kuleylka ku yaal hareeraha lamadegaanka.
Tallaabada qabow: jawigan iyo jiilaalka waa qabow ama aad u qabow. Waxaan sidoo kale heli karnaa kuleyl diiran ama dhexdhexaad ah oo leh roob yar iyo Esteban oo ah dhir dabiici ah. Badanaa waxay ku yaalliin dhul-beereedyo dhexdhexaad ah oo ka fog badda.
Lamadegaanka kulul: Jiilaalku waa mid fudud, in kasta oo aagagga dhulka gudihiisa ah uu heerkulku ku dhowaan karo eber digrii habeenkii. Xagaaga waa kuleyl ama aad u kulul. Meelaha qaarkood ee leh cimiladan, heerkulka xagaaga ayaa ah mid aad u sarreeya, kan ugu sarreeya meerahana waa la diiwaan geliyey. Roobabku aad ayey u yaryihiin. Waxay badanaa ku dhacdaa cirifka hoose ee labada dhinacba.
Cidlo qabow: jawigan iyo jiilaalka waa kuwo aad u qabow xagaaguna waa kuwo fudud ama diirran. Roobku aad ayuu u yar yahay dhirta lafteedu waa tan lamadegaanka, mararka qaarna xitaa ma jiraan. Waxaa jira latitude dhexdhexaad ah.
Kala soocida cimilada Köppen: kooxda C
Kooxda C dhexdeeda waxaan leenahay cimilo dhexdhexaad ah. Celceliska heerkulka bisha ugu qabow waa inta udhaxeysa -3ºC (kala soocyada qaarkood 0ºC) iyo 18ºC, tan bisha ugu diirranna waxay dhaaftaa 10ºC. Kaymaha ku meel gaarka ah waxaa laga helaa cimiladan.
Xeebta shilalka badda: waxay leedahay qabow ama jiilaal qabow ama xagaa qabow. Roobka ayaa sidoo kale loo qaybiyaa sanadka oo dhan. Waxaa jira dhir dabiici ah oo ah keymo adag.
Badda badda ee dhulka hoostiisa mara: Waxay u muuqataa qabow jiilaal qabow iyo xagaa run la'aan ah. Waxay leedahay roobab sanadka oo dhan waxaana jira meelo dabeylo xoog leh wata oo si dhib yar u oggolaanaya horumarinta dhirta.
MediterraneanWaxay leeyihiin jiilaal khafiif ah iyo kuleyl kulul, xagaaga. Roobabka badankood waxay da’aan xilliga jiilaalka ama xilliyada dhexe. Kaymaha Mediterranean-ka waa dhirta dabiiciga ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto kala soocida cimilada ee Köppen iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Kala soocida cimilada ee Köppen